Tsirony Kely Avy Amin’ny Mpanoratra Sy Ny Tononkalo Shiliana Fizarana Voalohany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Janoary 2018 16:27 GMT
Fanta-daza ho manana poety maro i Shily, anisan'izany ny Nahazo ny loka Nobel Gabriela Mistral, Amerikana Latina voalohany nahazo ny loka Nobel Prize ho an'ny Literatiora (1945) sy Pablo Neruda, iray amin'ireo poety be mpanaraka indrindra tamin'ny taonjato faha-20 (1971).
Tsy poety fotsiny ihany i Gabriela Mistral (ES), fa sady mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana ihany koa izy no mpikatroka revolisionera ihany koa. Niasa mafy izy tamin'ny fanovana ny fomba nahatakaran'ny Shiliana ny fanabeazana. Tamin'ny taona 1922, nahazo fanasana hiasa ho an'ny governemanta Meksikana izy mba hanampiana ny fampandrosoana ny fanavaozana ny fanabeazana. Indro ny santionany tamin'ny sanganasany, avy ao amin'ny tononkalo “Rocking” (ES).
Ny ranomasina sy ireo onja an'arivony, ny vatolampy, toa andriamanitra.
Mihaino ny ranomasin'ny mpifankatia
Mandrotsirotsy ny zanako aho.
Ny rivotra mitsoka amin'ny alina,
Manofahofa ny varimbazaha
Mihaino ny rivotry ny mpifankatia,
Andriamanitra, ray ary ny tontolo an'arivony,
Mandrotsirotsy tsy misy feo,
Mahatsapa ny tanany ao anaty aloka
Mpanoratra fanta-daza Shiliana iray hafa i Isabel Allende (ES). Nahazo loka maherin'ny 20 izy tany amin'ireo firenena samihafa ary boky miisa 16, izay nadika tamin'ny fiteny miisa 10 mahery. Pablo Neruda (ES) ihany koa dia sady poeta fanta-daza no fanta-daza amin'ny fandraisany anjara tamin'ny politika.
Nanaraka taorian'izay ireo taranaka vaovao. Mba hanandramana ny tsirony dia indro misy lahatsoratra iray avy amin'i Lizia (ES) ahitana tononkalo nosoratan'i Armando Uribe (ES) antsoina hoe “No hay Lugar”, Tsy misy toerana.
Tiako ianao ary halako. Hoy ianao hoe: Ahoana no hahatonga izany. Tsy fantatro. Tiako ianao ary halako […]
Ny fitiavako azy dia tsy misy taona, tsy mbola teraka […]
Tsy tia anao aho, tiako ny fialonako, ity fialonako ity dia izay hany mba navelanao ho ahy, ny fialonana sy ny hatezerana, ny tsy tia rano, mamon-divay aho […]
Tsy tia anao aho, tiako ny fialonako, io fialonana io dia izay hany mba navelanao ho ahy. Rehefa manjavona ao anatin'io lanitra feno fankahalana io aho, hovazavazaiko ianao tsy ho avy. […]
Nitondra ahy niala ny tongotro ny fahanginako -toy ny fahafatesana – ary nampiditra ahy tao anaty môzôle feno vovoka izay nilalaovako ny baolina famitahana. […]
Mpanoratra nentim-paharazana namoaka ny sanganasany tao amin'ny tranonkala ny bilaogera Shiliana toa an'i Miguel de Loyola (ES) sy Roberto Fuentes (ES). Literus (ES) ihany koa dia hetsika madinika izay manantena ny fandrisihana ny resaka momba ny literatiora sy ny tononkalo. Tantanan'ireo mpandray anjara ao amin'ny fampianarana poezia ny bilaogy ary tarihan'ilay poety Shiliana fanta-daza Raul Zurita. Namoaka ny antsafa iray [ES] niarahana tamin'i Zurita tamin'ny volana Desambra ihany koa i Paolo Astorga, poety iray hafa.